Blogger weyn ayaa howlgab noqday - Geofumadas
Blogger weyn ayuu ka fariistaa
Abriil, 2008 AutoCAD-AutoDesk
Wargeyska waa in aan la dirin Abriil 1, sababta oo ah qofkasta wuxuu u maleyn lahaa inuu ku ciyaarayo maalinta nacasyada, qaabka Anglo-Saxon oo u dhigma maalinta 'Fools April' iyo wiil, waa dad ku kaftama xag-jirnimada noocaas ah.
Ogaanshaha in aysan ahayn kaftan waa naxdin.
Waxaan ula jeedaa Pete Kesley, oo wax ku qoraya mid ka mid ah bogagga rasmiga ah ee 'AutoDesk': "Dirt".
Sababta uu howlgabnimada uga dhigay ayaa ah inuu soo maray hawl dheer oo kiimiko ah kadib markii kansarka la ogaaday. Wax wanaagsan oo ay sifiican udhacday laakiin wuxuu xaqiijinayaa inuu ka shaqeyn doono aag kale oo AutoDesk ah, kana fog baloogga. Waqtigan xaadirka ah waxaan rajeynayaa inaan ku haayo iskuxirka boggiisa blogroll, maxaa yeelay waxaan ka helay sida uu ugu qoray qaabkiisa wacdinta dadka adeegsada anti-AutoCAD… waan arki doonaa cidda ku qaadata dulucda madaniga 3D.
In alla intii dadku badali karaan, sawirkani wuxuu muujinayaa waxa ka hor iyo ka dib; Sida laga soo xigtay isaga, waa inuu cusbooneysiiyaa baasaboorkiisa maxaa yeelay iyagu ma aaminsana garoonka diyaaradaha
... nasiib wanaag isaga.
Post Previous" Hore 7 Computer Comprases
Post Next Khariidadaha Google, oo leh khadadka casrigaNext »